6. Iflethi enesauna nepuli enamanzi ashushu Kwifama - I-Airbnb
6. Iflethi enesauna nepuli enamanzi ashushu Kwifama
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJohann Und Maria
UJohann Und Maria yi-Superhost
Iflethi ikwifama ephilayo embindini weSalzkammergut kwichibi elihle laseMondsee. Indawo yokuhlala elungele abantwana isebenza njengendawo efanelekileyo yokuqala iintsapho kuhambo olwahlukahlukeneyo kunye nohambo oluya kummandla waseMondSeeLand kunye naseSalzkammergut. Iphuli, indawo entsha yezempilo kunye ne-sauna kunye ne-corared cabin onokuyisebenzisa. Sinendawo yethu yokuhlamba yeendwendwe zethu kuphela.
Ibhalcony, ishawa kunye neWC, i-cable-TV kunye nokufudumeza okuphakathi. Eyona nto ibalulekileyo: Ukuba uvula amakhethini akho kwangentseni, uya kuba nakho ukonwabela iimbono phezu kweLake Mondsee kunye neNtaba yaseSchafberg enomtsalane.
Indawo, ivenkile, iindawo zokutyela:
Le ndlu ibekwe phezu kwentaba ngasentla kwesixeko esincinci saseMondsee. Ufika eMondsee ngemizuzu eyi-10 ngemoto kwaye apho uya kufumana iindawo zokutyela kunye neevenkile. Ukuya kwisixeko saseSalzburg kukuthatha malunga nemizuzu engama-30.
Ukukhwela intaba kunye nokunyuka intaba ukusuka eflethini. I-Alpine skiing kunye ne-skiing enqumla ilizwe elikufutshane. 10 ngemoto ukuya kwindawo yokuhlambela eMondsee lake. Ungarenta iibhayisekile ngqo kuthi.
Uhambo lwasemini kunye nohambo:
I-White Horse Inn.
Iintaba zaseDachstein, eSchafberg.
Isandi soKhenketho loMculo.
Iinqanawa zokuhamba ngeenqanawa.
Intengiso ethandekayo, yemveli yeKrisimesi ngexesha lokufika.
Wolfgangsee, Mondsee, Attersee, Fuschlsee, Traunsee, Grundlsee, Hallstättersee njl.
Abantwana bayakuthanda ukondla kunye nokufuya izilwanyana efama.
4.92 · Izimvo eziyi-103
Uxolo kunye nendalo.
Umbuki zindwendwe ngu- Johann Und Maria
Sikhona ngenxa yakho. Sibuze nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Au